Faah faahin dheeraad ah oo ku saabsan dabkii xalay ka kacay suuq bacaad magaalada muqdisho – Kismaayo24 News Agency
Faah faahin dheeraad ah oo ku saabsan dabkii xalay ka kacay suuq bacaad magaalada muqdisho
by Tifaftiraha K24 3rd September 2017 098
Waxaa xalay fiidkii hore dab xoogan uu ka kacay suuqa labaad ee magaalada muqdisho ee suuq bacaad .
Dabka ayaa waxa uu ku fiday goobo ganacsi oo ku yaala gudaha suuq bacaad waxaana la sheegay in qasaaro hantiyadeed uu ka dhashay.
Waxaa lagu guuleystay in goor dambe la damiyo dabkii xooganaa ee xalay ka kacay Suuq-Bacaad ee Degmada Yaqshiid.
Dabkaasi oo marka hore ka bilowday qeybta Sarifka ah ee Suuqaasi ayaa ku sii fiday qeybaha kale wuxuuna baabi’iyay dhismayaal badan,sidoo kale waxaa damkaasi uu sababay qasaare hantiyadeed oo xoogan,iyadoo gebi ahaanba ay basbeeleen dhismaayaal ganacsi oo badan.
Dab ka dhashey koronto ayaa si dhaqsi ah ku fiday,kaasi oo si deg deg ah u gubay hanta badan oo tiilay Bakhaarada Ganacsiga,balse marki dambe lagu guuleystay in la dembiyo sida uu warbaahinat u sheegay C/salaam Axmed C/llaahi oo kamid ah howlwadeenada gaadiidka demdemiska ee Gobolka Banaadir.
Saaka ayaa xaaladda goobtii demba uu ka kacay waxaa lagu arkayaa dadweyne aad u farabadan oo u soo daawasho tagay,mashaqadaasi dhacday,iyo ganacsatadii ku hanta beeley oo ka murugaysan dhacdadaasi.
Ma ahan arrin cusub dem ka koco suuqyada Muqdisho ugu waaweyn. Balse arrinta ugu dhibka badan ayaa ah goobaha qaar koor oo u dhisan qaab isku raran ah oo ciriiri ah,taasi oo ay adagtay in si fudud gaadiidku ay u maraan si loo damiyo.
Daawo: Maxaadan ogeyn oo maamulada galmudug iyo puntland uga bilaabmaya magaalada galkacyo